Parsely: Uhlalutyo lokuPapashwa koMxholo lwenziwe ngokuLungileyo | Martech Zone
Ukuba inkampani yakho ibeka imali kuphuhliso lomxholo, uya kufumana umgangatho kubahlalutyi akukho nto ingaphantsi kokukhathaza. Nazi izizathu ezimbalwa… ababhali, iindidi, imihla yokupapashwa kunye nokumakisha. Kukho imibuzo ethile obuzwa yinkampani yakho ongenakuphendula ngayo:
Nguwuphi umxholo esithe sawupapasha kule nyanga usebenze kakuhle?
Nguwuphi umbhali oqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi kwindawo yethu?
Zeziphi iithegi ezaziwa kakhulu?
Zeziphi iindidi zomxholo ezithandwa kakhulu?
Cacisa amaqabane nabapapashi bedijithali ukubonelela ngokucacileyo kubaphulaphuli ngokuqonda kubahlalutyi iqonga. Amawaka ababhali, abahleli, abaphathi besiza, kunye neetekhnoloji esele zisebenzisa Cacisa ukuqonda ukuba yeyiphi imixholo etsala abakhenkethi bewebhusayithi, kwaye ngoba. Iidashboard kunye neeAPIs zeParse.ly zisetyenziswa ngabathengi ukwakha izicwangciso zedijithali ezibavumela ukuba bakhule kwaye babandakanye abaphulaphuli abathembekileyo.
I-parse.ly yaphula ukusebenza komxholo wakho kwiideshibhodi ezinokucoleka ngokulula, kubandakanya ukujonga ngokubanzi, ukusebenza kombhali, isixhobo, iimbono zembali, ukusebenza kweposi, ukusebenza kwecandelo, kunye nababhekisi. Unako kwakhona ukuvelisa nokuthumela iingxelo.
Iimpawu zikaParse.ly zibandakanya:
Umxholo wedeshibhodi -Iiparbhodi zomxholo wexesha lokwenyani weParse.ly ngoku othembekileyo ngabasebenzi abangaphezulu kwe-700 yeendawo ezihamba phambili zewebhu, kubandakanya iTechCrunch kunye neThe Intercept. Ixhasa ukubulawa kweemethrikhi ngaphandle kwebhokisi, ezinje ngeembono, iindwendwe, ixesha kunye nezabelo.
API -Umhlathi API ishwankathela ulwazi malunga nokugcwala kunye nomxholo ngeenjongo zokubonelela ngokukhawuleza ngendlela yokubonelela ngesiqulatho somxholo kwindawo; iifoto zendlela yokuhambisa idatha ngokukhawuleza; okanye ukudityaniswa okulula kwedatha yezithuthi zendlela kunye neenkqubo ezikhoyo zolawulo lomxholo. Isixhobo esidityanisiweyo sokufaka ngokukhawuleza iisayithi esele zikhona, iiapps, kunye neengxelo ngeParse.ly yedatha- kubandakanya idatha yethu yexesha lokwenyani.
Umbhobho wedatha Umbhobho wedatha kaParse.ly yeyona API yokugqibela, ehambisa idatha eluhlaza malunga neesayithi zakho, ii -apps, kunye nabasebenzisi, ngokuxakaniseka okuncinci kunye nokuguquguquka okuphezulu. Yindlela etyebileyo yokuvula i-100% yedatha emva kweParse.ly's kubahlalutyi, kwaye uyihlalutye ngokweemfuno zombutho wakho. Kuyinto eqhelekileyo, kwaye inokuxhasa imicimbi yesiko yazo zonke iintlobo. Ngaba unomdla wokulinganisa ubunzulu bescroll, isenzo sokwabelana ngesiza, ukucofa umxholo, ukubonakala kwintengiso, okanye imirhumo yeleta. Nganye kwezi inokumodareyitha njengomsitho okrwada, uthunyelwe kuParse.ly, kwaye uhanjiswe ngePayipi ledatha.
Isithuba seScreen Parse
Ingxelo yeScreen Parse
Imbali Yembali Yokubonisa iZithuba
Ushwankathelo lweScreenshot Parse.ly
Izixhobo zeParse Screen
Ababhali beParse Screen
Ababhekisi beParse Screen
tags: iimethrikhi zabaphulaphuliuhlalutyo lomxholoukuqonda umxholoumxholo wemetrikiumxholo wokusebenzaucazululengokukodwaukulandelela ababhaliukulandelelwa komhla wokupapashwaiindidi zokulandela umkhondoiithegi zokulandela umkhondo
Ii-4 P's zangoku zokwenza iiNjini zokuKhangela